‘धमाल’को सिक्वेल ‘टोटल धमाल’मा अजय देवगनका साथमा माधुरी र अनिल पनि ! - Koshi Online
‘धमाल’को सिक्वेल ‘टोटल धमाल’मा अजय देवगनका साथमा माधुरी र अनिल पनि !
विराटनगर, साउन २२, बलिउडको सुपरहिट कमेडी फिल्म ‘धमाल’को तेस्रो सिक्वेल ‘टोटल धमाल लामो समयदेखि चर्चामा छ ।
यस फिल्ममा रितेश देशमुख, अरशद वारसी र जावेद जाफरीको मुख्य अभिनय रहने यस फिल्ममा अजय देवगन, माधुरी दिक्षीत र अनिल कपूरको पनि अभिनय रहने भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार ‘टोटल धमाल’ को तेस्रो सिक्वेल इन्द्र कुमारले निर्देशन गर्ने भएका छन् । यस फिल्मलाई ठूलो बजेटको फिल्म बनाउनका लागि पूरा टिम स्पेशल इफेक्ट र भिएफएक्समा काम गरिरहेका छन् ।
खबरका अनुसार यस फिल्मका निर्देशक इन्द्र कुमारसहित प्रोड्यूसर्स टिमले ‘टोटल धमाल’का लागि भीएफएक्समा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । र, भिएफएक्स हाल्ने आइडिया भने निर्माता तथा अभिनेता अजय देवगनको भएको खबर छ ।
स्मरणीय होस् कि ‘टोटल धमाल’ सन् २००७ मा आएको मल्टी स्टारर फिल्म ‘धमाल’को तेस्रो सिक्वेल हो । ‘डबल धमाल’ को नामबाट यसको दोस्रो सिक्वेल २०११ मा रिलिज भएको थियो । दुबै सिक्वेल दर्शकले खुबै मन पराएका थिए । यस फिल्म अजय देवगनसहित मारुती र फक्स स्टार स्टुडियोले प्रोड्यूस गरिरहेका छन् ।